Rakotondrazafy Lalatiana : “Feno ny fepetra mety hiteraka fipoahana sosialy” | NewsMada
Rakotondrazafy Lalatiana : “Feno ny fepetra mety hiteraka fipoahana sosialy”
Par Taratra sur 03/02/2017
Mihamitombo sy mihalalina ny fahasahiranam-bahoaka. Ahina ny fipoahana sosialy. Feno ny fepetra, raha ny nambaran-dRakotondrazafy Lalatiana. “Tsy mitady vahaolana ny fanjakana amin’ny fahatapahan-drano, delestazy, tsy fandriampahalemana… Marobe ny zavatra iainan’ny vahoaka isan’andro: amin’izao, feno indrindra ny fepetra mety hiteraka ny fipoahana sosialy.” Io ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny Freedom, Rakotondrazafy Lalatiana, teny Faravohitra, afakomaly, manoloana ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao fotoana izao: delestazy, fidangan’ny vidim-piainana, tsy fandriampahalemana…
Tena zava-misy ny fipoahana sosialy amin’izao, azo tsapain-tanana raha ny fiakaran’ny vidin’entana. Tsy ho zakan’ny vahoaka ny saran-dalan’ny taxi-be 500 Ar. Miampy ny fiakaran’ny vidin-tsolika, miteraka fiakaran’ny vidim-piainana ankapobeny. Ny vary aza, efa 2 000 Ar ny kilao.
Avela haneho hevitra ny olona
“Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra”, hoy izy. Nefa tsy mieritreritra ny fitondram-panjakana fa mitroatra io fahatezeram-bahoaka, rehefa tazonina. Efa nampianatra antsika izany ny tantara. Sasana atidoha ny vahoaka hoe sao manongam-panjakana, raha vao manao hetsika.
Rehefa tsy avela haneho hevitra amin’izay maharary azy ny olona, ary tsy handray andraikitra fa mizahozaho tsy hanao na inona na inona ny fitondram-panjakana: hipoaka ihany ny sarom-bilany amin’ny fotoana iray, araka ny nambarany. Hisorohana izay, omeo fahalalahana haneho hevitra ny olona. Ampiasao ny kianjan’ny Demokrasia, Ambohijatovo.
Tsy fahatokisan’ny vahoaka mpitondra ny fitsaram-bahoaka
Midika ho tsy fahatokisan’ny olona intsony ny fitondram-panjakana ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Toy ny mahatsapa ny olona hoe tany tsy misy fanjakana eto, aleony raisina an-tanana ny azy: fitadiavana vahaolana amin’ny delestazy, tsy fandriampahalemana… Tsy manolotra vahaolana amin’izay tadiavin’ny olona tsinona ny fanjakana.
Voatery mipetraka eo amin’ny toeran’ny fanjakana mitady vahaolana ny olona, mikarakara ny tenany amin’ny fitsaram-bahoaka, ohatra, fa tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana. Lasa toy ny tany tsy misy fanjakana eto.
Mihaino izany ve ny mpitondra bemarenina hatramin’izay?